Taxliilin ku Saabsan Qodobka 4 Aad e War-Murtiyeedkii Doorashooyinka Qaranka e laguso gabagabeeyay Mogadishu September 17th 2020 – CRPS
September 21, 2020 September 21, 2020 crps 0 Comment
Qodobka 4-Aad Ayaa Sidan u qoran “ In Xulista ergada ay iska kaashanayan Odayaasha Dhaqanka, Bulshada rayidka ah iyo Dawlad Goboleedka”.
Sida ku cad qodobkan waxaa muuqata ergada soo xulaysa xildhibaanka Golaha Shacabka e doorashada soo socota inay doorway ku leeyihiin 3 Qolo oo kala ah Dhaqanka Beesha Kursiga leh, Bulshada rayidka ah e ka jirta maamulkas iyo Dawladda ka arrimisa degaankas macne ahaan 5-ta Xubnood e ka midka ah jambuuriyadda Federaalka ah e Somalia e heshiiska ku saxiixday Mogadishu.
Halka fahamka iyo Bogaadinta ubaahan
Sida an ogsoonahay doorashadii dad-banayd e 2016 o ay dooranayeen 51 ergay tirada guud, o ay beeshu u madax banaanayd, waxay caqabad wayn ay ku noqdeen intii badnayd maamuladii iyaga lagaso doortay, haddi an si kale u fasirno si’ dhab ah uma aysan matalin degaan doorashooyinkii laga soo doortay, waxaa heshiiskan taariikhiga ahi fursad siinayaa in maamulku uu la yimaado ergo 50 % oo dhalasho ahaan kasoo jeedda beesha kursiga leh, halka 51% ay beeshu si madax banan ay uqoranayan. Tillaabadan ayaa yaraynaysa matalaad xumidii ay caanka ku noqdeen xubniihi Parliament-kii 10 Aad e hadda muddo xileedkoodu gabaabsiga yahay.
Doorka Buslada Rayidka ah:
Doorka bulshada rayidka ah e abaabulan ee la aqoonsan yahay waxay ay noqon donaan o kaliya kor-joogtayn iyo u qareemid hadday ay xaqiijin tacaddi ka hor inta aysan doorashadu xubintu aysan dhammaan, waxay kusoo jedin karaan aragtidooda goob iyo goor ku habboon.
Doorka Dhaqanka Beesha:
Dhaqanka beesha aya soo qori doona 51% Ergada Beesha iyagoo kuso gudbin doona xilliga loo qorsheeyay, ergada ayso gudbin donaan aya loo hubin donaa ka qaybgalka dhallinyarada iyo haweenku inay matalaad ku leeyihin iyo in ergadu dhalasho ahaan ay beesha ay u nasab sheegtaan kasoo wada jeedaan.
Doorka Maamulka Xubinta ka JFS:
1. Guud ahaan maamulku wuxuu mas’uul ka yahay habsami u socodka iyo xaqiijinta doorashooyinka qaranka ee heer Federaal e 2-da aqal si habboon oo hufan waafaqsanna shuruucda doorashooyinka qaranka e lagu heshiiyay.
2. In ay garabkooda soo xulaan 50% ergo kursi kasta e degaanka lagaso dooranayo, ku was oo laguso xulay hufnaan, daacadnimo iyo daah furnaan, si’ ay usoo saran xildhibaan kusoo baxay rabitaanka shacabka dawladdaas laguna keeno hannaan ka barax-tiran musuqmaasuq iyo laaluush bixin.
3. Nidaamkan waxaa loo marayaa o kaliya xildhibaanada Golaha Shacabka
Faaii’dooyinka uu helayo xilidhibaanka Bar-lamaanka 11 Aad.
A. Hufnaan iyo wada shaqayn dhaw inuu la yeesho Maamulkiisa/keda,
B. Hufnaan, daacadnimo iyo Wada Shaqayn dhab ah oo dhex marta MXDF iyo JFS
C. Metalaad dhab ah iyo ka warqab bulsho
D. Matalaad iyo uqareemid dhab ah dhanka sharciyada iyo korjoogtanta fulinta heshisyada bulsho
E. Wada shaqayn buuxda e 3-da heer maamul dawlo sida dastuurku qeexay.
F. Horumarinta hiigsiga iyo himilooyinka Qaranka iyadoo loo marayo hannaan isla Oggol ah
Waxaan bogaadinyaa sida huffan e uu igu matalay hanaanka doorashooynka qaranka Madaxweyne Ahmed Mohammed Islaam, oo isagu u taagan har iyo habeen sidii Somaaliya ay uga gudbi lahayn marxaladaha adag una maareeyay si ku habboon xaaladda dalka waxaa can baxday oraahdii Madaxwayne Axmed xilligii isfahmi waagu ka jiray Jubbaland e ahayd (Kugu-san iyo Kugu-San) e jajuub iyo cabburin aysan soconayn. Madaxwayne waxaan kugu xasuusan donna dulqaadkaaga iyo dabacsanaan iyo tanaasulka arrimaha masiiriga ah xilliga baahidu jirto. Waxaan ku aqoonsannay inaad tahay astaan dawladnimo qaran.
Arrintani waa fikirkayga kaliya iyo fasiraadda an ka fahmay heshiiska qodabadiisa 4 Aad ka Faisal Mataan ahaan.
W/Q: Faisal Mataan
← Ka mid Noqo Xubin kamida C4PP iskana diiwaan gali Website ka